China Fiberglass voatetika strand Mat Powder binder mpanamboatra sy mpamatsy | Beihai Fiberglass
Fiberglass voatetika strand Mat Powder binder
1.Izany dia vita amin'ny kofehy voapaika an-tsokosoko tazomina miaraka amin'ny binder vovoka.
2.Mifanaraka amin'ny resins UP, VE, EP, PF.
3.Ny sakany amin'ny horonana dia manomboka amin'ny 50mm ka hatramin'ny 3300mm.
Powder E-Glass Maty kofehy voatetika dia vita amin'ny kofehy voatetika tsinjara nitazomana binder vovoka. Izy io dia mifanentana amin'ny resin UP, VE, EP, PF. Ny sakany amin'ny horonana dia eo anelanelan'ny 50mm ka hatramin'ny 3300mm.
● Vaky haingana amin'ny styrène
● Hery matanjaka be, mamela ny fampiasana amin'ny fizotran'ny tanana hamokatra faritra lehibe
● Mando tsara sy mando haingana amin'ny resina, mampanofa rivotra haingana
● Fanoherana ny harafesina asidra ambony
Ny fampiharana farany ampiasaina dia misy sambo, kojakoja fandroana, kojakoja moto, fantsona mahazaka harafesina simika, fiara mifono vy, tilikambo mangatsiaka ary singa fananganana
Ny fangatahana fanampiny amin'ny fotoana handoavana sy ny famoahana dia mety misy raha ilaina. Natao hampiasaina amin'ny fametrahan-tanana, ny fantsom-pandrefesana ny filamenta, ny famolavolana famatrarana ary ny fizotran'ny laminatiora mitohy.
Ny famaritana manokana dia azo vokarina arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Fomba famokarana mat
Ny rovings voangona dia voatetika amin'ny halavany voafaritra, ary avy eo latsaka amin'ny conveyor tampoka.
Ny kofehy voatetika dia mifamatotra amin'ny alàlan'ny binder emulsion na binder binder.
Aorian'ny fanamainana, ny fampangatsiahana ary ny familiana, dia atsangana ny tsihy voatetika.
tsirairay Maty kofehy voatetikadia maratra amin'ny fantsom-taratasy izay misy savaivony 76mm ao anatiny ary 275mm ny savaivony. Fonosina sarimihetsika plastika ilay horonana mat, ary avy eo fonosina anaty boaty baoritra na fonosina taratasy kraft. Ireo horonan-taratasy dia azo apetraka mitsangana na mitsivalana. Ho an'ny fitaterana, ny horonan-taratasy dia azo ampidirina anaty cantainer mivantana na amin'ny paleta.
Raha tsy voafaritra mazava dia tokony hotehirizina ao amin'ny faritra maina sy mangatsiaka ary tsy misy orana ny Mat Matetika. Soso-kevitra ny hitazomana ny mari-pana sy ny hamandoana ao amin'ny 15 ℃ ～ 35 ℃ ary 35% ～ 65%.
Teo aloha: E-vera stitched voatetika strand Mat
Manaraka: Fibre basalt
Voadidy Strand Mat 450gsm
E-vera stitched voatetika strand Mat